Wararkii ugu dambeeyey Xamas oo weerartay Israel iyo Yahuudda oo xasuuqay caruur badan. |
Wararkii ugu dambeeyey Xamas oo weerartay Israel iyo Yahuudda oo xasuuqay caruur badan.
Qasa(GNN):- Ugu yaraan 20 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeuymo ay ciidamada Yahuudda ka fuliyeen Marinka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka, kadib markii Xamas ay gantaallo laga soo tuuray magaalada ku weerareen Israel.
Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in dadka lagu dilay duqeymaha oo lagu garaacay Waqooyiga Gaza ay ku jiraan sagaal caruur ah.
Duqeymaha ayaa yimid kadib markii Xamas ay dhowr gantaal ku tuureen Israel kadib markii uu dhammaaday waqti ay u qabteen inay ciidamadooda ka baxaan dhismaha Masjidka Al-Aqsa.
Ciidamada Israel ayaa sheegtay in weerarka ku dileen saddex ka mid ah dagaal-yahanada Xamas.
Goor sii horreysay oo maanta ah, xaaladda kacsan ee Al-Aqsa ayaa kasii dartay kadib markii ciidamada Yahuudda ay xoog ku galeen Masjidka, waxaana rabshado ka dhashay ku dhaawacay 300 qof kadib markii ay adeegsadeen xabaddo caag ah, bambooyinka aan qarxin iyo sunta dadka ka ilmeysiisa.
Dhinaca kale, dab xooggan ayaa caawa ka kacay dhimsha Masjidka Al-Aqsa, kaasi oo laga arki karay qeybo ka mid ah magaalada Qudus.
Sababta dhalisay dabka ayaa weli caddeyn, hase yeeshee wuxuu yimid markii ciidamada Yahuudda ay xoog ku galeen Masjidka.